महरा विरुद्धको मुद्दामा बहस सकिएलगत्तै अदालतबाट आयो यस्तो खबर, अब के हुन्छ ? — Sanchar Kendra
महरा विरुद्धको मुद्दामा बहस सकिएलगत्तै अदालतबाट आयो यस्तो खबर, अब के हुन्छ ?
काठमाडौँ । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरावि’रु’द्धको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ सकिएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आइतबार अन्तिम बहस सकिएको हो । अदालतले सोमबार फैसाला सुनाउने सह-प्रवक्ता टीकासिं खत्रीले बताए । आइतबार नै फैसाला सुनाउने तयारी भएपनि समय अभाव कारण सोमबारलाई सारिएको प्रवक्ता खत्रीले बताए ।
जिल्ला न्यायाधीश अम्बरराज पौडेलको इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ चलेको थियो। महराको पक्षबाट रमण श्रेष्ठ, शेरबहादुर केसी,लभ मैनाली,दिनमणी पोखरेल,भीमार्जुन आचार्यलगायतले बहस गरेका थिए।सरकारी पक्षबाट उमाकान्त खनाल लगायतका वकिलहरुले बहस गरेका थिए। संघीय संसद्को सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीमाथि बलात्कारको प्रयास गरेको आरोपमा महराविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भएको थियाे ।
पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्लाको आदेशविरुद्ध महरा ५ मंसिरमा उच्च अदालत गएका थिए । प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुख महरामाथि १२ असोजको साँझ संसद् सचिवालयकी एक महिला कर्मचारीलाई बला’त्कारको प्रयास गरेको आरोप लागेको थियो । आफूले प्रतिवाद गर्दा कुट’पिट गरेको दाबी गर्दै उनले प्रहरी कन्ट्रोलको १०० मा फोन गरेर गुहार मागेकी पनि थिइन् । उनको फोनका आधारमा महानगरीय प्रहरी वृत्त, बानेश्वरको टोली उनको कोठामा पुगेको थियो ।
त्यसको भोलिपल्ट यो घटना बाहिर आयो । तर, महरा र उनको सचिवालयले भने आरोप अस्वीकार गरेको थियो । त्यसवेला महराले कर्मचारी समायोजनमा परेपछि आफूमाथि रिस पोखिएको दाबी गरेका थिए । तर महरा र पीडित महिलाको कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर), सीसी टीभी फुटेज लगायतको विश्लेषणबाट प्रहरीले महरा त्यो दिन सुविधानगरस्थित महिलाको घरमा पुगेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
१४ गते बसेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय बैठकले उनलाई सभामुख र सांसद दुवै पदबाट राजीनामा दिन सुझाएको थियो । लगतै महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिए । यद्यपि सांसद पदबाट भने राजीनामा दिएनन् । उनको राजीनामा आएको केहीबेरमा पीडित महिलाको नयाँ भिडियो सार्वजनिक भयो, जसमा बोली फेर्दै उनले महरा आफ्नो कोठामा आउँदै नआएको दाबी गरिन् ।
जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा पनि पीडित भनिएकी महिलाले बला’त्कार नभएको दाबी गरेकी थिइन् । तर, उपलब्ध प्रमाणका आधारमा महरालाई कसूरदार होइनन् भनी मान्न नसकिने भन्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको थियो । त्यसयता उनी डिल्लीबजार कारागारमा सजाय भुक्तान गरिरहेका छन् ।
मातातीर्थको १७३ रोपनी जग्गामा बाबुरामलाई तान्ने तयारी
नेपाल ट्रस्टको जग्गा नक्कली मोही खडा गरेर व्यक्तिका नाममा सार्न आदेश दिनेलाई छानविन गरेर कारवाही गरिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । ओलीले मन्त्रिपरिषदबाट कानूनविपरीत निर्णय गरेको भनिएको अवधिमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । भट्टराई १२ भदौ २०६८ देखि ३० चैत २०६९ सम्म प्रधानमन्त्री थिए । भलै, सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले कसैको नाम उल्लेख गरेनन् ।
मालपोत कार्यालय, कलंकीले ७ असार २०७० मा नेपाल ट्रस्ट जग्गाधनी रहेको काठमाडौंको मातातीर्थ, महादेवस्थान, थानकोट, सतुंंगल र इचंगुनारायणको जग्गा व्यक्ति (मोही) का नाममा कायम गरेको देखिन्छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी जग्गा साविक थानकोट र महादेवस्थान गाविसमा १०२ रोपनी ३ आना जग्गा मोहीका नाममा कायम भएको थियो ।
त्यतिबेला नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, बाागमती अञ्चल, काठमाडौंका नाममा रहेका विभिन्न ७८ कित्ता जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको थियो । नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ अनुसार ट्रस्टको नाममा रहेको जग्गामा स्वतः ट्रस्टको हक कायम हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई जानाजान गलत ‘रिर्पोटिङ’ गरेको हुन सक्ने मालपोत कार्यालय, कलंकीका ती अधिकारीको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘मिति, क्षेत्रफल आदिमा तलमाथि पारेर फेरि चलखेल गर्न खोजेको हुन सक्छ ।’ मालपोत कार्यालय, कलंकीले ‘मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार’ व्यक्तिका नाममा लालपूर्जा वितरण गरेको दाबी गरेको छ । तर, २०६९ मा भएको भनिएको उक्त निर्णयको प्रति भने उपलब्ध नभएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
१७३ रोपनीभन्दा बढी ट्रस्टको जग्गा व्यक्तिलाई दिनू भन्ने विषय राजपत्रमा समेत प्रकाशित भएको देखिँदैन । त्यतिमात्रै होइन, निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषदले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई र विभागले मातहतका कार्यालयलाई गरेको भनिएको परिपत्र/आदेशपत्र समेत भेटिएको छैन । मालपोत कार्यालय, कलंकीका प्रमुख मालपोत अधिकृत टेकराज अर्याल आफूले यो विषयमा अध्ययन गरिरहेकाले तत्काल प्रतिक्रिया दिन नसकिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो विषयमा विस्तृत अध्ययन गरेर दुई/तीनपछि प्रतिक्रिया जनाउनेछु ।’
विस्तृत अनुसन्धानविना यो प्रकरणका दोषी को-को हुन् भनेर किटान गर्न गाह्रो छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनअनुसार यो जग्गाबारे निर्णय भएको मितिमा डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए भने चन्द्रदेव जोशी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री थिए । त्यतिबेला दिनेशहरि अधिकारी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव थिए भने जीतबहादुर थापा मालपोत विभागका महानिर्देशक थिए ।
शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनमा उल्लेख गरेपछि आफूहरू प्रमाण जुटाउने दौडधुपमा लागेको ट्रस्टको कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पनि यस विषयमा विस्तृत विवरण मागिएको छ, हामी सकेसम्म छिटो प्रमाण जुटाउन लागि परेका छौं ।’